Nohamafisin’ny Fitsaràna Ambony Ao Makedonia Ny Lamandy Ho An’ireo Mpanao Gazety Nitanisa ireo Fanambaràna Fisian’ny Kolikoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Janoary 2016 12:16 GMT
Vakio amin'ny teny русский, македонски, Shqip, Español, English
Ny toniandahatsoratra ao amin'ny gazetiboky Fokus, Jadranka Kostova sy ny mpanao gazety Vlado Apostolov, nivoaka avy tamin'ny fakàna am-bavany azy tao amin'ny fitsaràna, May 2013. Dikanà lahatsary avy tamin'ny A1on.mk.
Na filoha teo aloha tao amin'ny Sampam-pitsikilovana Makedoniana aza izy ankehitriny, toa mbola mahavita mandrangaranga ny dindony lehibe ao amin'ny rafi-pitsaràna ao amin'ny firenena ihany i Sasho Mijalkov, indrindra rehefa tafiditra amin'izany “ny voninahiny sy ny lazany”.
Nohamafisin'ny Fitsaràna Momba ny Lalàmpanorenana any Makedonia ny sazy lamandy 8.300 euros ho an'ireo mpanao gazety roa avy amin'ny gazetiboky tsy miankina, Fokus, Jadranka Kostova sy Vlado Apostolov, noho ny fanalàm-baràka na “nanitsakitsaka ny voninahitra sy ny lazan'ilay lehiben'ny sampam-pitsikilovana teo aloha” — izay rahalahin'ilay Praiminisitra teo aloha Nikola Gruevski ihany koa.
Fanintelony izany ny fitsaràna Makedoniana no nanome sazy tamin'ny fanononana loharano nilaza fa tafiditra amin'ny resaka kolikoly i Mijalkov. Nametraka ny lamandin'ireo mpanao gazety tamin'ny fiandohan'ny taona 2014 ny fitsaràna ambaratonga voalohany, nanamafy izany didy izany ny Fitsaràna Fandravàna didy, ny Septambra 2014 ary nandà ny fampakàrana didy nataon'ireo mpanao gazety kosa ny Fitsaràna momba ny Lalàmpanorenana, ny Novambra 2015.
pejy voalohan'ny gazetiboky Fokus, mampivandravandra ny sarin'i Sasho Mijalkov. Sary: Fokus.mk
Nilaza tamin'ny fanapahankeviny ny Fitsaràna momba ny Lalàmpanorenana fa nahita tsara ireo fitsaràna tany amin'ny ambaratonga ambany fa tsy nisy porofo hanesorana ny andraikitr'i Apostolov sy Kostova mihitsy. Nilaza avy eo ny fitsaràna fa tsy nisy torohay ho an'ny tombontsoam-pirenena ireo tantara navoaka fa nanana eritreritra “ny hanaparitaka tsahotsaho fotsiny, izay manitsakitsaka mafy ny voninahitra sy ny lazan'ny olona iray”.
Ireo mpanao gazetin'ny gazetiboky Fokus kosa anefa, nilaza fa navoaka ireo tantara ireo mba handrisika ny hisian'ny adihevitra tamin'ireo resaka tombontsoam-pirenena ary tsy isalasalàna ny fisian'ny tombontsoam-pirenena ao amin'ny votoatin'ireo tantara.
Tokony handoa 5.000 euros i Kostova, izay tonian-dahatsoratr'ilay gazetiboky, ary ilay mpanao gazety Apostolov kosa nosaziana handoa lamandy 1.000 euros. Ho fanampin'izany, tokony handoa ny vola lany tamin'ny fitsaràna, izay mitentina 3.300 euros izy roa miaraka, izay tafakatra ho 8.300 euros raha atambatra.
Ny volana Janoary 2013, nitory ny Fokus ilay lehiben'ny sampam-pitsikilovana teo aloha, izay nametra-pialàna noho ny filazan'ny mpanohitra azy ho nanao kolikoly sy nanampatra fahefàna. Namoaka tantara maro ny Fokus, niaraka tamin'ireo fanambaràn'i Igor Ilievski, masoivoho teo alohan'i Makedonia tany amin'ny Repoblika Tchèque, izay niampangàny an'i Mijalkov ho nanao kolikoly.
Na nanontany valinteny tamin'i Mijalkov momba ireo fiampangàna ireo aza ireo mpanao gazety, nandà ny handray anjara tamin'ny tafatafa izy ary avy eo nitory.
Ny Oktobra 2014, niantso ireo rehetra mpanao gazety sy ireo olon-tsotra ny Fikambanan'ireo mpanao gazety ao Makedonia mba hampiseho firaisankina miaraka amin'ireo mpanao gazetin'ny Fokus, ary hanampy amin'ny fanangonana ireo vola lamandy napetraky ny fitsaràna noho ireo tantara fanadihadiana navoakany.
Ny 14 Oktobra 2014, nikarakara hetsika fanangonam-bola tao amin'ny tanàna tranainin'i Skopje ireo fikambanana olom-pirenena hafa sahala amin'ny “National Network against Homophobia and Transphobia of Macedonia” (Tambajotra Nasiônaly manohitra ny fankahalàna ireo mitovy taovam-pananahana mifanambady sy ny ‘Transphobie’), mba hanampiana ny Fokus amin'ny handoavana ny lamandin'ny fanalàm-baràka sy ny vola lany tamin'ny fitsaràna.
pejy voalohan'ny gazetiboky Fokus taorian'ny lamandy voalohany ho an'ny mpanao gazety, ny taona 2014
Ny volana Jona 2013, nomarihan'ny Mpitondra tenin'ny Firenena Mikambana momba ny Fahalalahana Maneho Hevitra, Frank La Rue, ho tranganà fampitahorana ny media ilay raharaha. Samy nilaza iny didy iny ho fampitandremana mazava ny media daholo ireo mpanao gazety isam-batanolona, ny Fikambanan'ireo mpanao gazety ao Makedonia, ny Sendikàn'ireo Mpanao Gazety, ireo Mpitati-baovao Tsy Voafetran-tSisintany (RSF) , ary ireo fikambanana hafa, ary maro ireo nanamafy ny “fatahorana hihetsika” nahazo ireo mpanao gazety Makedoniana naterak'io.
Hita maty taminà loza-piarakodia somary mampiahiahy ny 27 Martsa 2013 i Nikola Mladenov, ilay mpanonta sady mpanoratra tao amin'ny Fokus. Taorian'ilay loza, nanajanona ny fanontàny vaovao ny Fokus, gazetiboky miseho isan'andro sy isan-kerinandro. Niverina nanonta indray ny gazetiboky mivoaka isan-kerinandro ny Jolay 2013.
Voalaza tao amin'ilay lazaina hoe “baomba” ny fahafatesan'i Mladenov — ilay fiporitsahan'ny fihainoana fifandraisana tsy ara-dalàna nataon'ny Sampam-pitsikilovana notantanan'i Mijalkov — izay navoakan'ny mpanohitra ara-politikan'ny firenena nandritra ny taona 2015. Namboraka resadresaka teo amin'ireo mpanao politika Makedoniana izany “baomba” manokana izany, tafiditra amin'izany ny Minisitry ny Atitany teo aloha Gordana Jankuloska, ny lefiny Ivo Koteski, ary Martin Protuger lehiben'ny kabinetran'ny Praiminisitra Gruevski, nilaza fa nidikiditra tamin'ny fanadihadiana ireo tomponandraiki-panjakana ary nikarakara sotasota tamin'ny fisaonana ny fahafatesan'ny mpanao gazety Mladenov. Vokatr'izany, nandefa fangatahana ny hanokafana indray ny fanadihadiana ny lehiben'ny mpanohitra Zoran Zaev sy ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety ao Makedonia.